“တစ်ခန်းရပ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » “တစ်ခန်းရပ် “	8
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 25, 2016 in Poetry | 8 comments
ဂျစ်စူ says: ကောင်းပါဘီတော်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ခုတော့လက်ကိုင်ဖုန်းခေတ်ရောက်နေပြီဆိုတော့..လွဲဖို့မရှိ…လမ်းခွဲရန်မလိုတော့ပါ..ခိခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: လက်ကိုင်ဖုန်းရှိနေပေမယ့်လွဲချင်ရင်လွဲကိုလွဲနိုင်လွန်းပါပေတယ်
uncle gyi says: ပေါက်ကွဲနေပြီ
ချာတိတ်မလေးတစ်ကောင်နဲ့ လမ်းခွဲဖူးတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင် လူရှုပ်ရှုပ်ထဲမှာ လမ်းခွဲကြတာ။
အမှန်တော့ အဲ့အကြောင်း စာတောင် မဖွဲ့ခဲ့မိဘူး။
ဘယ်ဖွဲ့မလဲ။ ညောင်ညိုပင်အောက်မှာ လမ်းခွဲတာလောက်မှ ကဗျာမဆန်တာကြီး
“ဘီလူးကြီး”ogre says: ဘာ!!!!!!! …..!!
လမ်းခွဲမယ် …. ဟတ်လား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကြောက်တ်ပါတယ်ဗျာ
အောင် မိုးသူ says: ခုခေတ်က ညောင်ညိုပင်မှာ လမ်းမခွဲတော့ဘူး အူးပေါက်